Ukubukeka kothando: indlela yokubona | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 10/06/2022 10:00 | Izithandani Nezocansi
Amehlo ayingxenye yomqondo wokubona futhi awenza abe yindlela yethu yokukhuluma ngomzimba ukuveza esikuzwayo. Nakuba kungase kubonakale kungakholeki, amehlo ethu abonisa izimpawu ezicacayo lapho sisibhekile bangaba nomdlandla Ungawabona kanjani?
Lolu hlobo lokubukeka siluchaze kabanzi ingeminye yemibono eqoqiwe ngesayensi. Uma ngenhlanhla kuwuhlobo lokubukeka ofuna ukukuthola, uma uthanda lowo mfana noma intombazane, uyazi ukuthi nawe bangazisebenzisa bona ngokwabo.
1 Ukubukeka kothando, ngingabakhomba kanjani?
2 Yiziphi ezinye izinhlobo zokubukeka ezikhona?
3 ukubukeka okuphathekayo
4 Uma ufuna ukuqala ezothando
5 Lapho usufuna ukuqoma ngamehlo
Ukubukeka kothando, ngingabakhomba kanjani?
Umuntu angaba sothandweni nomunye umuntu, nokho kuzobonakala kulabo ukubuka okuqhubekayo, Uzokubheka ngqo emehlweni uma ekhuluma nawe. Kuyiqiniso ukuthi inkanuko ngokwayo ivame ukudlala iqhinga, futhi mhlawumbe ngezinye izikhathi amahloni asenza sifulathele ubuso. Kodwa uma unaka, lokho kubukeka kubuya, ngisho noma ukuhlazeka kuthathe isimo, noma yisiphi isihloko esithakazelisayo sangaphandle, ekugcineni akakwazi ukulahlekelwa lokho kubuka kwamehlo okuqondile.
Wake waqaphela nini ukubukeka kudlulisa ukukhanya? Hhayi-ke, lokho kubukeka okungenakuphikiswa, okudlulisa inzalo, kunakho ukukhanya, amandla, lapho abafundi benwebeka. Hhayi-ke, yilolu hlobo lokubukeka okubonakala sengathi lunikeza uma umuntu ethanda ngenhliziyo.
Yiziphi ezinye izinhlobo zokubukeka ezikhona?
Kukhona ezinye izinhlobo zokubukeka ezingacacisa lezo izikhathi zothando noma intshisekelo. Sihlaziya ukuthi kunjani uma ubheka eceleni, lapho kujulile noma uma ubheka eceleni.
Phakathi kohlobo oluthile lwengxoxo ungabona uma lokho kubukeka kufuna ukuveza leso sikhathi: Uma amehlo akho enyakazela kwesokudla yingoba kukhona akucabangayo noma uqamba amanga.
Si amehlo abheke phezulu lapho ekhuluma, kungenxa yokuthi uzama ukukhumbula okuthile noma ukunaka lokho abakushoyo.
Nini lokho kubuka kuncike phansi Kulapho uzama ukusondela emizweni engaphakathi, uvuselele leyo mizwa futhi wenze kubonakale sengathi ujabulile noma ujabulile ngobukhona bakho. Bheka ukuthi ibuyela emuva yini beka isithombe ngaphambili futhi ukugqolozele ngoba yilapho engaphuthelwa nemininingwane eyodwa ngawe futhi efuna ukukulalela.
Uma lowo muntu enakho amehlo avalwe uhhafu, kungenxa yokuthi kungase kubangele ukuthi acasuke ngokuthile noma othile, angase acasuke. Uma icwayiza njalo futhi akalibheki kahle iso lakhe kungenzeka ukuthi akahlaliseki noma kukhona akufihlayo, nakuba kukhona lapho angacwayiza kakhulu ngoba ezama ukufihla ukuthi usemathandweni.
Kufanele uhlaziye ezinye izinhlobo zokuthinta ukuze ukwazi ukuhumusha lokho kubuka. Uma ekubheka emamathekaBheka uhlobo lokumamatheka analo. Uma izihlathi ziphakama futhi amakhona amehlo akhe ashwabene, kungenxa yokuthi lowo muntu ujabulile ngokuba khona kwakho nemizwa yakhe iyiqiniso.
Kunemininingwane eyengeziwe, isibonelo, lapho lowo muntu ukubheke phansi naphezulu kungenxa yokuthi ukhombisa intshisekelo enkulu kuwe, uyakuhlaziya futhi angasho ukubukeka okuhlaselayo nokungakhululeki. Nokho, lapho ngokuqhubekayo ukubheke emehlweni futhi kubonakale kukubusa yilapho lowo muntu ezithemba kakhulu, uhlale enokuzethemba okukhulu.
Uma ufuna ukuqala ezothando
Yebo lokho amehlo agqolozele futhi akhokhiswe ngokuphepha, yilapho singabona ngakolunye uhlangothi ukuthi lowo muntu uthakazelisa kangakanani. Yilapho sizophinde sikhombise ukuthi hlobo luni lokubukeka esilihumushayo ngoba ngempela sithanda lawo mandla nobungqabavu.
Kungenzeka futhi ukuthi umuntu akakwazi ukugqolozela, kodwa uyakwenza ngokuqhuma, ngokuphazima kweso noma izingxenyana zesekhondi. Uma ukubukeka kwakho ayikhululekile, kodwa kunalokho iyaphazamisa, abheke kancane kancane abese eyahamba, yingoba kukhona uhlobo oluthile lomuzwa wothando.
Si ukubuka isikhathi esingaphansi komzuzwana nje bese-ke ebheka eceleni, eyedwa kungasho ukuthi unentshisekelo. Nokho, bhekisisa uma lokho kumomotheka okuhle kuhambisana naye, ngoba kuyosho okuthile okuthakaselekayo.
Lapho usufuna ukuqoma ngamehlo
Uma okwakho kuwukuyenga, ukubukeka kungakhona thuthukisa leso sipho osifihlile. Ungalahlekelwa imininingwane ekuyengeni kwakho futhi zama njalo ukugqolozela lapho ukhuluma nalowo muntu omthandayo.
Kodwa kwenze ukhululekile, akubonakali sengathi uyagadla indawo yakho noma ufuna ukukuhlupha. Ungaphinda ubheke ngokulangazela bese ubheka eceleni ukuze uthole izingxenyana zomzuzwana.
uma uyindoda zama ukungawabuki amabele omuntu wesifazane, lokho awukuthandi. Uma ufuna ukubheka, kwenze ngobuhlakani futhi uzame ukukhuluma kakhulu ubuso nobuso futhi ubheke emehlweni. Ngisho kubo bobabili ubulili, ukubukeka okuvusa inkanuko akujabulisi, lokho kungashiywa lapho kunokuzethemba okwengeziwe.
Nokho, amandla okuxhumana phakathi kwabantu kufanele aguquke, kumelwe sizame ukwazana ngokomuntu siqu futhi singavumeli okuthile okufanele sikufunde kwabanye kulahleke: ulimi olungakhulumi.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Ukubukeka kothando: indlela yokuzibona